Madaxweyne Farmaajo oo xalay kormeer ku tagay Xaruunta Taliska Booliiska Soomaaliyeed – Walaal24 Newss
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kormeer ku tagay Xarunta Taliska Booliiska ayaa la kulmay Taliyaha ciidanka Booliska S Gaas Bashiir Cabdi Maxamed iyo Saraakiisha kale ee taliska, wuxuuna kala hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta ka dhaxeysa Booliiska iyo Shacabka.
Taliye Kuxigeenka Booliska Sareeye Guuto Sakiya Xuseen Axmed ayaa ka warbixisay Kormeerka Kadiska ee Madaxweynaha iyo Waxyaabaha uu kala hadlay.
“Waxaa si kadis ah noogu yimid Madaxweynaha Soomaaliya annagoo ku guda jirna Shirka amniga Guud, Madaxweynaha wuxuu la dardaarmay Saraakiisha Howgalada ku jirta, isagoo si gaara u xusay in Bulshada lala shaqeeyo, Howlgaladana la xoojiyo”.ayay tiri Sareeye Guuto Sakiya Xuseen Axmed.
Mudane Farmaajo ayaa Booliska ku bogaadiyey hawlaha lixaadka leh ee Qaranka ay u hayaan, hadana waxa uu hoosta ka xariiqay in marnaba aan la aqbali karin in dhibaato soo gaarto shacabka oo ah kuwa loo adeegayo sida ay sheegtay Sakiya Xuseen Axmed.
“Madaxweynaha waa Madaxweyne Bulsho Fariinta uu Bulshada ka waday ayuu nala wadaagay, wuxuu si weyn ugu dardaarmay inaan lagu xadgudbin Bulshada, anagoo sugida Amniga Ahmiyada Koowaad siineyna hadana Bulshada loo naxariisto”.
Ciidamo lagu soo tababaray Dalka Turkiga oo soo gaaray magaalada Muqdisho
Baarlamanka Jubalan ee taageera golaha isbadaldoonka oo doortay Gudoomiye